FAHAMAIZANA TENY AMBODIN’ ISOTRY :: Olona roa naratra mafy, trano am-polony potiky ny afo • AoRaha
FAHAMAIZANA TENY AMBODIN’ ISOTRY Olona roa naratra mafy, trano am-polony potiky ny afo
Mavesabesatra ny fahavoazana tamin’ny firehetana niseho teny Ambodin’Isotry. Vehivavy iray niendaka ny hoditra amin’ ny lamosiny, lehilahy iray may ny ilan’ny vatany: ireo no vokatry ny fahamaizan’ny trano am-polony teny Ambodin’Isotry, omaly hariva. Samy efa tsaboina eny amin’ny hôpitaly izy ireo.
Niainga tao amin’ny tranohazo kely iray teo anelanelan’ ireo trano vita amin’ny biriky maro ny afo, araka ny fitantaran’ ireo mponina. “Tokony tamin’ny 2 ora tolakandro no nahita setroka avy tao amin’ilay tranohazo izahay. Tsy nisy olona anefa tao amin’io trano io. Niray hina ny mponina teo amin’ny manodidina samy niezaka namono ny afo saingy vao mainka niitatra aza. Tany amin’ny 2 ora sy sasany tany ho any no tonga ny mpamonjy voina. Niha nahazo vahana ny afo satria nanenika tamin’ireo trano teo akaiky”, hoy Rakotosoa, mponina eny an-toerana.
Kamiaon’ny sampana mpamonjy voina miisa telo no tonga voalohany hamono ny afo. Vetivety dia lany ny rano tamin’ny kamiao iray ka na dia nisy loharano ilaina amin’ny fahamaizana na irony “bouche d’incendie” irony aza tsy lavitra teo, dia tsy naharaka izany. Voatery naka rano somary lavitry ny toetrana nitrangan’ny loza ireo mpamonjy voina.
Tsy mbola voafehy ny firehetana, ora roa taorian’ny fanombohana namonoana ny afo. Niitatra tamin’ireo trano lehibe teo amin’ny manodidina, izay ny ankamaroany dia toeram-pivarotana, ny afo. Samy niezaka namoaka ireo entana tao an-trano ny tompon’ireo trano. Nisy ireo namoaka entana, dia misy kosa ireo minia manararaotra mangalatra. Soa fa tonga haingana ireo pôlisy misahana ny jiolahy mahery vaika na “SAG” nifehy ny toe-draharaha.
Niteraka olana teo amin’ny fifamoivoizana mihazo an’ny 67Ha ity fahamaizana ity satria voatery notapahina ny lalana manoloana ny trano fandraisam-bahiny lehibe iray. Naharitra ora maro ny famonoana ny afo. Nisy tamin’ireo niharam-boina may trano no latsa-dranomaso vokatry ny fahamaizan’ireo entana rehetra tao an-tranony. “Vao tamin’ny faran’ny herinandro teo izahay no nividy fanaka hitsenana ny fety. May daholo anefa izy rehetra, toy ny seza fandraisana vahiny izay an-tapitrisany maro ny vidiny” , hoy i Tahirisoa Yollande, isan’ireo may trano sady nanganohano ny masony.
FITRANGANA ARETINA HAFAHAFA :: Mony iray no nanimba ny ilan-tarehin’ ity tovolahy